Tumblr သည်မည်မျှကြီးသနည်း။ | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2014 Douglas Karr
အိုကေ၊ ပထမဆုံးမေးခွန်းက Tumblr ဆိုတာဘာလဲ။ Tumblr သည် microblogging platform နှင့် social networking website တစ်ခုဖြစ်သည် (ယခု Yahoo! တွင်ပိုင်ဆိုင်သည်) ။ Platform သည်အသုံးပြုသူများအား multimedia နှင့်အခြားအကြောင်းအရာများကိုတိုတောင်းသောဘလော့ဂ်သို့တင်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းစနစ်ကိုအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်မျှဝေရန်နည်းစနစ်များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးချသူများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်မြင်သာမှုတွန်းအားပေးသည်။ သူတို့ကအစတကယ့်ကိုကောင်းတယ် မိုဘိုင်း app.
ငါ Tumblr မကြာခဏမနေစဉ်, ငါပြု၏ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်၏ Tumblr ဘလော့ဂ်တွင်မျှဝေပါ ယင်းမှတဆင့် Jetpack WordPress ကဆက်ပြောသည်ကြောင်းပေါင်းစည်းမှု။ ငါ Tumblr ၏အနည်းငယ်ကိုလည်း လိုက်၍ ဘယ်သူမှမျှဝေထားသည့်အချက်အလက်များကိုစနစ်ဖြင့်အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်သောအသစ်ပြောင်းခြင်းအီးမေးလ်ကိုရရှိသည်။ စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်၊ ဒီကွန်ယက်ဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုသင်မသိနိုင်ပါ။ ကိန်းဂဏန်းများတော်တော်လေးအထင်ကြီးများမှာ!
ဝဘ်ဆိုက်အိမ်ရှင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဒီသတင်းအချက်အလက်မျှဝေခဲ့သည် Tumblr အကြောင်း:
Tags: tumblr ဘယ်လောက်ကြီးမားသလဲTumblrfacebook vs tumblrPinterest vs tumblrtwitter vs tumblrtumblr ကဘာလဲ
သင်၏ဖောက်သည်များသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ်စဉ်းစားပုံ
Mashape သည် developer များနှင့် APIs များကိုဆက်သွယ်သည်